Shiinaha Customized Bacda xafaayad la qaadan karo-saareyaasha, shirkado, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Shandada Warshadaha Co., Ltd.
Guri > Boorsooyin > Bacda xafaayadda > Bacda xafaayadda la qaadan karo
Bacda xafaayadda la qaadan karo
·Size: At least, you need a baby bag that can hold diapers, wipes and one or two bottles. If you are willing to prepare for anything, then you will need something large enough to change clothes, toys, snacks, rags, pacifiers, rattles and hand sanitizer. · Pockets: Most parents find that diaper bags with many pockets help keep things organized. Some baby bags have special pockets, such as pockets to hold mobile phones or tablets, insulated pockets to keep the bottle cool, and pockets that can be used to store dirty or beaten baby clothes. · Stroller strap: Many diaper bags are equipped with special straps that can be easily attached to the handlebar of the stroller. · Diaper changing pad: Some diaper bags include a changing pad that can be moved or folded out of the bag for immediate diaper changing. · Easy to clean: life is a fact-almost everything in and around babies becomes messy, so you may need a diaper bag that can be machine washed, or a diaper bag that can be wiped quickly.
1. Soo bandhigida alaabada bacda xafaayadaha la qaadan karo:
(1) Bacdan xafaayadda ee la qaadan karo waxay ka sameysan tahay 420D dhar nylon ah oo la dhaqay. Dusha sare waxaa lagu daboolay daahan biyaha celiya. Waxay leedahay sifooyin xoog leh oo biyo-biyood leh waxayna si wax ku ool ah uga hortagi kartaa biyaha roobka inay qoyaan gudaha bacda xafaayadda la qaadan karo waqti yar. Dharkaan oo leh sifooyin adag oo adag, waa dhar ku habboon samaynta bacaha xafaayadda.
(2) 230T twil nylon maro Oxford ah ayaa lagu isticmaalaa gudaha, kaas oo leh xoog is jiidjiid iyo dareenka gacmaha.
(3) Waxaan u isticmaalnaa jiinyeerka caanka ah ee YKK sidii wax lagu furo bacda xafaayadda la qaadan karo. Jiinyeerkani wuxuu leeyahay xoogaa qaniinyo sare wuxuuna si weyn u wanaajin karaa isku halaynta iyo badbaadada shaqada furitaanka boorsada.
(4) Noocan bacda xafaayadda ah ee la qaadan karo, waxaan u isticmaalnaa shay super ningax ah si aan uga dhigno aagga heerkulka. Waxqabadka kuleylka kuleylka xoogan wuxuu si weyn u dheereeyaa waqtiga kuleylka kuleylka.
(5) Bacda qalalan iyo tan qoyan ee kala-saarku waxay si wax ku ool ah u kala sooci kartaa qalabka qalalan iyo kuwa qoyan, taas oo si weyn uga hortageysa faafitaanka bakteeriyada iyo sumowga waxyaabaha kale ee ilmaha
(6) Boorsooyinkeena xafaayada ayaa sidoo kale lagu dhex ridi karaa gaariga wax lagu gado si loo yareeyo culeyska hooyada isla markaana ay ugu fududaato hooyadu inay daryeesho ilmaha.
(7) Bacaha balastarka ee shaqeynaya, sida bacaha keydka suufka, kiishashka dharka lagu keydiyo, boorsooyinka lagu keydiyo toy, bacaha keydka taangiga budada ah iyo bacaha keydinta kuleylka. Dibedda waxaa loogu talagalay boorsooyinka wax lagu kaydiyo ee shaqeynaya, sida boorsooyinka lagu keydiyo boorsada, bacaha lagu keydiyo parasol iyo boorsooyinka keydka tuugga ee looga hortago tuugada (8) Muuqaalka casriga ah iyo nashqadda kartida weyn leh labaduba waa qurux badan yihiin waxayna qaadan karaan waxyaabo badan oo daryeelka carruurta ah.
(9) Waxaa dhabarka ku yaal boorso jiinyeer ah, oo keydin karta alaabada elektarooniga ah ee gacanta sida taleefannada gacanta iyo kiniiniyada
2. Xaddidyada alaabta (qeexitaannada) bacda xafaayadda la qaadan karo
Ardaydu waxay bartaan isticmaalka
Nylon Oxford oo maydhay
230T maro maro Oxford ah
Boorso xafaayad la qaadan karo oo laba jibbaaran
Madow, casaan, guduud, buluug
Dhererka 34cmX Width 13cmX Dhererka 30cm
Alaabta daryeelka ilmaha
3. Waa maxay boorsada xafaayad wanaagsan?
Marabtaa inaad ogaato inaad runti ubaahantahay bac xafaayad? Hadday sidaas tahay, waa maxay shaqada aan raadinayo? Boorsooyinka xafaayadda dhallaanka waxay ku yimaadaan qaabab iyo cabbirro kala duwan, laakiin doorashada boorsada xafaayadda ugu fiican ee adiga kugu habboon waxay kuu horseedi kartaa dookh. Kahor iibsiga, fadlan tixgeli astaamaha soo socda:
· Cabir: Uguyaraan, waxaad ubaahantahay boorsada dhallaanka oo qaadi karta xafaayadaha, masaxa iyo hal ama laba dhalo. Haddii aad diyaar u tahay inaad wax u diyaar garowdo, markaa waxaad u baahan doontaa wax ballaaran oo ku filan si aad u beddesho dharka, alaabta carruurtu ku ciyaarto, cuntooyinka fudud, calallada, masruufayaasha, qamaarrada iyo nadaafadda gacmaha.
· Jeebabka: Waalidiinta badankood waxay ogaadaan in boorsooyinka xafaayada oo jeebado badani ku jiraan ay ka caawinayaan waxyaabaha inay abaabulaan. Bacaha carruurta qaarkood waxay leeyihiin jeebado gaar ah, sida jeebabka lagu qaato taleefannada gacanta ama kiniinno, jeebado dahaaran si dhalada loogu qaboojiyo, iyo jeebado loo isticmaali karo in lagu keydiyo dharka carruurta ee wasakhda ah ama la garaaco.
· Suunka gaariga lagu riixo: Boorsooyin badan oo xafaayad ah ayaa lagu qalabeeyaa suumano gaar ah oo si fudud ugu xirnaan kara shaashadda gaariga.
· Suufka beddelaya xafaayadda: Bacaha xafaayadda qaarkood waxaa ku jira suuf beddelaya oo la dhaqaajin karo ama laga laaban karo bacda si loogu beddelo xafaayad isla markaaba ah.
· Si fudud loo nadiifiyo: noloshu waa xaqiiqo-ku dhowaad in wax kasta oo carruurta ku xeeran iyo hareerahooduba noqdaan kuwo qasan, markaa waxaad u baahan kartaa bac xafaayad ah oo mashiinka lagu dhaqi karo, ama kiish xafaayad oo dhaqso loo tirtiri karo.
5. Xirxirida iyo gaarsiinta boorsooyinka xafaayada la qaadan karo
(2) Cabirka baakadka ee caadiga ah: 34cm X 13cm X 30cm, waxaan u habeyn karnaa cabirka baakada naqshadeynta iyadoo loo eegayo baahiyahaaga, si loo badbaadiyo xamuulka.
(3) faahfaahinta xirxirida: 36cm X 33m X 50cm. 10PCS / kartoonka Waxyaabaha kartoonka: K = K 5-lakab warqad jiingado qaro weyn leh, kartoon ganacsi shisheeye.
(4) Miisaanka guud ee sanduuqa oo dhan: 7.0Kg.
(5) FCL miisaanka saafiga ah: 5.0Kg.
(7) Haddii loo baahdo, waxaan naqshadeyn doonnaa baakadka bacdan xafaayadda la qaadan karo iyadoo loo eegayo shuruudahaaga.
(8) Haddii aad u baahan tahay muunad ka mid ah boorsadan xafaayadda la qaadi karo, waxaan dooran doonnaa inaan hawada kuugu soo dirno.
(5) Sanduuqayaga shirkadda ayaa si joogto ah u ansax ah oo ay maamulaan shaqaale xirfadlayaal u ah adeegga macaamiisha. Waad noo soo qori kartaa talo iyo cabasho wakhti kasta. Waxaan u aqrin doonnaa una soo jawaabi doonnaa si hufan oo taxaddar leh.
Q4. Intee in le'eg ayey kugu qaadaneysaa inaad la xiriirto oo aad jawaab celiso?
Q5. Qaab sheegis ah kee aqbashaa? Immisa maalmood ayaa muddada xigashada?
S7: Ma aqbashaa kormeerka dhinac saddexaad? Ma bixin kartaa warbixinno tijaabo ah? Sidee tayada wax soo saarkaagu yahay?
(3) Waxaan nahay soo saare bacaha xafaayada Disney, bacaha Wal-Mart iyo alaabada Samsonite. Fadlan ku kalsoonow tayada wax soo saarka.
Jawaab: (1) Boorsadeenna fudud waxay soo saartaa 50,000 oo xabbo maalintii iyo bil kasta 1,500,000
(2) Boorsooyinka gacanta oo ay ku jiraan farsamo aad u dhib badan, soo saar maalinle ah oo ah 3000 gogo 'iyo wax soo saar bille ah 100,000
S10: Ma leedahay xad MOQ ah?
(4) Warbixinta tijaabada alaabada waa la bixin karaa
(5) Waxaan nahay soosaarayaal bacaha xafaayada Disney, boorsooyinka Wal-Mart, iyo alaabada Samsonite. Fadlan ku kalsoonow tayada wax soo saarka.
Calaamadaha kulul: Bacda xafaayadda la qaadan karo, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka
Bacaha carruurta beddela